Namaste Filmy, Author at Namaste Filmy – Page 696 of 700
माछाले स्तन छोप्ने शुभेच्छा भन्छिन : 'केही एक्स्ट्रा गरम न त भनेर यस्तो गरेका हौ ।'
झण्डै ३० वटाजति नेपाली फिल्ममा अभिनय गरिसके पनि खासै स्थापित हुन नसकेकी नायिका शुभेच्छा थापा पछिल्लो समय फिल्म निर्माण मा होमिएका छन । उनले निर्माण गरेको चलचित्र मिस नेपाल अगामी फाल्गुन १६ बाट रिलिज हुने…
छविको फिल्मलाई पहिलोपटक ऋषिले निर्देशन गर्ने ।
हाल लज्जाको प्रि प्रोडक्सनमा ब्यस्त निर्माता छविराज ओझाले नयां फिल्म बनाउने मनस्थिति बनाइसकेका छन । उनले लज्जाको प्रदर्शन संगै काम थालिने फिल्मको निर्देशन जिम्मा भने ऋषि लामिछानेलाई दिएका छन ।त्यसो त छवि ओझा ब्यानरसंग फिल्म…
स्वं. शिव रेग्मीको नाममा ‘शिव रेग्मी मनले मनलाई छुन्छ चलचित्र पुरस्कार’ स्थापना
माघ २८ , काठमाण्डौ आज काठमाण्डौमा एक कार्यक्रम बिच ‘शिव रेग्मी मनले मनलाई छुन्छ चलचित्र पुरस्कार’ स्थापनाको घोषणा गरिएको छ ।नेपाली चलचित्र क्षेत्रका बरिष्ठ निर्देशक स्वं. शिव रेग्मीप्रति हार्दिक श्रद्वाञ्जली ब्यक्त गर्दै उहाँको सम्मान स्वरुप…
तिमी उता म यता । भ्यालेन्टाइनमा बिराट र अनुष्का दुइतिर ।
भारतीय स्टार क्रिकेटर बिराट कोहली र उनको दिलकि रानी उर्फ स्टार अभिनेत्री अनुस्का शर्मा आउदै गरेको भ्यालेन्टाइनमा दुइ तिर हुने भएका छन । भ्यालेन्टाइनको बेला बिराट राष्ट्रिय टोलीबाट टेस्ट म्याच खेल्न न्युजिल्याण्डमा ब्यस्त रहनेछन भने…
प्रेमिकालाई सेन्सर बोर्डबाट यू सर्टिफिकेट ।
आगामी फाल्गुन १६ लाई रिलिज डेट तोकेको चलचित्र प्रेमिकाले सेन्सर बोर्डबाट युनिभर्सल सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको छ । मन छुने मायप्रेमको कथा बोकेको चलचित्रलाई पछिल्लो समय नृत्य निर्देशनमा ब्यस्त रामजी लामिछानले निर्देशन गरेका हुन ।रवि आचार्यको…
आलोकलाई आफनो फिल्म निर्देशनको जिम्मा दिए सुदर्शनले
फिल्म निर्देशकको रुपमा आफनो छवि बनाएको निर्देशक सुदर्शन थापाले धन्दा, मधुमास पछि अब नयां फिल्म ‘अझै पनि’ को निर्माण गर्ने भएका छन । रमाइलो कुरा त यहानेर छ कि सुदर्शन आफै एक कुशल निर्देशक भएर…
नेपाली नायिका बंगलादेशी चलचित्रमा ।
बंगलादेशी चलचित्र ‘सादा कालो आकाशेर क्यानभासे’ अर्थात मायाको परिचयमा एक नेपाली नायिकाले अभिनय गर्ने भएकि छन । यसअघि नेपाली चलचित्र ढुवानीमा आइटम डान्स गरेकी अर्चना देलालले बंगलादेशी चलचित्रमा अभिनयको अवसर प्राप्त गरेकी हुन । थ्रीलर…